डेंगी प्रकोप चलेको बेला नजँचाइ नखानुस् यी 'पेन किलर', रक्तश्रावले जान सक्छ ज्यान :: Setopati
डेंगी प्रकोप चलेको बेला नजँचाइ नखानुस् यी 'पेन किलर', रक्तश्रावले जान सक्छ ज्यान
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, भदौ २४
काठमाडौंसहित देशभर अहिले डेंगीको संक्रमण बढ्दो छ। टाउको दुख्नु, जीउ कटकट खानु, ज्वरो आउनु सुरूमै देखिने सामान्य लक्षण हुन्।
हामी सबैजसोको घरमा दुखाइ कम गर्ने औषधी (पेन किलर) प्रायः हुन्छ। नभए पनि यी लक्षण देखिनासाथ हामी धेरैले आफैं किनेर खान्छौं। टाउको र जीउ दुख्ने साह्रै भए पेन किलर खानुस् भनेर मेडिकलवालाहरूले पनि सुझाउँछन्।
तपाईं पनि यसै गर्दै हुनुहुन्छ भने होस् गर्नुस् है, डेंगी संक्रमण भएका बेला कतिपय यी औषधीले स्वास्थ्य सुधार होइन, झनै खतराजनक अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छन्।
डेंगी संक्रमणमा केही पेन किलरले बिरामीलाई थप जोखिममा पुर्‍याइदिने वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ रामेश कोइराला बताउँछन्।
'डेंगीमा मानिस मर्ने भनेकै रक्तस्रावका कारण हो,' उनले भने, 'केही पेन किलरले बाह्य र भित्री रक्तश्राव हुन झनै सहयोग पुर्‍याउँछन्।'
ब्रुसेट (Brucet), ब्रुफिन (Brufen), फ्लेक्जन (Flexon), निम्स (Nims) लगायत पेन किलरले रक्तश्राव बढाउन सहयोग पुग्छ।
यस्ता औषधीलाई NonSteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) भएका औषधी भनिन्छ।
डाक्टर कोइरालाका अनुसार डेंगी भएका बिरामीको रगतमा 'प्लेट्लेट्स' को मात्रा कम हुन्छ। प्लेट्लेट्स भनेको हाम्रो रगतमा हुने साना कोषिका हुन्। तिनले रगत जमाएर बग्न नदिने काम गर्छन्। यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेखित पेन किलर खाए तिनले 'प्लेट्लेट्स'लाई काम गर्न झनै व्यवधान पुर्‍याउँछन्। जसले गर्दा रक्तश्राव हुने सम्भावना झनै धेरै हुन्छ।
'यो औषधीले दुखाइ र ज्वरो कम गर्ने भए पनि र रगत जम्न नदिएर शरीरभित्र चाँडै रक्तस्राव गराउँछन्। डेंगीका बिरामीको मृत्यु हुने भनेकै आन्तरिक रक्तस्राव भएर हो,' डाक्टर कोइराला भन्छन्, 'यी औषधीले कलेजोमा पनि असर गर्छन्।'
डेंगीको प्रकोप चलेको बेला शरीर, टाउको दुख्यो भने सामान्य पारासिटामोल मात्र खाएर तुरून्त डाक्टरकहाँ जानुपर्ने उनी सुझाउँछन्।
आफैं जान्ने भएर वा मेडिकलवालाको भरमा जे पायो त्यही गरेर पेन किलर खानु हुँदैन।
डेंगीका उपचारको निम्ति कुनै विशेष औषधी वा खोप बनिसकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि डेंगीको ज्वरो र दुखाइमा 'एनएसएआइडी' भएका औषधीहरू नखान सुझाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेककुमार लाल पनि यसै भन्छन्।
डेंगीमा सामान्यतया ज्वरो, रुघाखोकी, टाउको दुख्ने र एकदमै धेरै जीउहात गल्छ। आँखाका गेडी फुट्लाजस्तो हुन्छ। यो अवस्थामा पेन किलर खानुहुँदैन। सामान्य पारासिटामोल र झोलिलो पदार्थ खानुपर्छ।
डेंगीका गम्भीर लक्षण भनेको आँखा, नाक, मुखबाट रगत बग्नु हो। यसमा हामीले खाने पेन किलरको भूमिका बलियो हुन्छ।
'रक्तस्राव हुने अवस्थामा पुगेको मान्छेले राम्ररी उपचार नपाए ज्यान जान सक्छ,' डा. लालले भने, 'हामीले थाहै नपाइ हाम्रो ज्यान जोखिममा पारिरहेका छौं।'
यस्तै लामखुट्टेले ओसारेको डेंगी भाइरसबाट झन्डै पाँच हजार बिरामी परेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा महानिर्देशक डा. विवेककुमार लाल बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६, १३:३९:००